Shiinaha Iyo Jiifka Server Tayada, jiifku warshadaha, xigashooyinka accessories jiifku, Warshad - Goldenor Electronic Technology Co., Ltd.
Shirkaddu waxay leedahay xaashi sax ah xaashida birta, naqshadeynta caaryada iyo waxsoosaarka, waxsoosaarka shaabbinta, dahaadhka buufin iyo awoodaha isku imaatinka. Isla mar ahaantaana, shirkaddu waxay u qaadataa baahida macaamiisha inay udub dhexaad u tahay, waxayna isu keentaa koox tayo sare leh oo ku saabsan xirfadaha iyo farsamooyinka, waxayna ku dadaaleysaa inay macaamiisha siiso hal-abuurnimo naqshadeyn ah maanta marka badeecooyinka si heer sare ah isugu midoobaan. One-stop xal kartoo guud ahaan wax soo saarka.
Kiiska Cusub ee 2U 8Disk Server
Waxyaabaha: 1.0-1.2mm xoog qaro weyn oo bir birta ah (SGCC);
Midabka: Dhegta dacwadu waa budo madow duban, taageerada HDD waa anti-dubista hadhuudhka ciidda madow, qayb ka mid ah qaybta ugu sarraysa santuuqa ma aha rinjiga la dubay;
Hard disk: 8 * 3.5 "disk adag oo lagu beddeli karo"
Nidaamka kala-baxa kuleylka: Taageerada 4 80 * 80 * 38 taageereyaal, qaab dhismeedka taageere ku beddelashada kulul, si loo hubiyo shuruudaha baahinta kuleylka oo buuxa;
Kiis Cusub 2U 12Disk Server Oo Lagu Sameeyay Shiinaha
midabka: Dhagaha shamiska waxaa lagu dubay budo madow, qaybta HDD waa anti-dubidda carrada-hadhuudhka madow, jirka mashiinka weynna lama rinjiyeynin;
disk adag: 12 * 3.5 "kulul fur adag"
Nidaamka qaboojinta: Taageerada 4 80 * 80 * 38MM taageereyaal, qaab dhismeedka taageere-swappable si loo hubiyo shuruudaha kala-baxa kuleylka;